Home Wararka Gen indha cadde”Macquul maahan al-shabaab ayaan la dagaalamyeen hubka iyo dareeyskeenana waa...
Gen Yuusuf Maxamed Siyaad indha cadde oo kamid ah saraakiisha millatariga Soomaaliya ayaa ka hadlay halka ay A-lshabaab ka helaan hubka iyo dareeska ciidanka ee ay weerarada u adeegsadaan.
Waxaa uu beeniyay Genaraal Indha Cadde in dowlada Soomaaliya ay darees iyo Hub siiso dagaalamayaasha Al-shabaab.
“Wax macquul ah ma ahan in dowlada Soomaaliya oo dagaal kula jirta Al-Shabaab inay hubkeeda iyo dareeska ciidamadeeda siiso.”ayuu yiri Indha-cadde oo wareysi siiyay mid kamid ah idaacadaha Muqdisho.
Hase yeeshee, Indha Cadde ayaa sheegay in Al-shabaab ay hubka meelo kale ka helaan, inkastoo uusan sheegin meelaha ay hubka iyo dareeska ka helaan Al-shabaab.
Previous articleShir lagu heshiisiinaayo Oromada iyo Soomaalida oo Addis Abba ka furmayo
Next articleSaxafigii Jamal Kashoqgi oo Salaadii Janaasada looga tukaday Magaalooyin badan Dunida
Jahawareer ka jira cida mas’uulka ah ka hortaga CaronaVirus! G. Banaadir...